मोदीबाट जनकपुरका लागि घोषणा गरेकाे सय करोड सहयोग गुम्ने खतरा! spacekhabar
मोदीबाट जनकपुरका लागि घोषणा गरेकाे सय करोड सहयोग गुम्ने खतरा!
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरधामलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा विकास गर्न एक सय करोड रुपैयाँ स्वेच्छिक अनुदानको घोषणा गरे। उक्त घोषणा भएको करिब १३ महिना बितिसक्यो। यो अवधिमा मोदी भारतमा दोस्रो कार्यकालका लागि पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसके। चुनावी भाषणका क्रममा मोदीले बोलेअनुसार हुने हो भने उनी पुनः जनकपुर भ्रमण गर्ने समयतालिका पनि निकट भविष्यमै तय होला।
छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्री मोदीले जनकपुरधामलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक नगरको रुपमा विकास गर्न उक्त आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेका हुन्। घोषणाको वर्ष दिन बितिसक्दासम्म उक्त रकम खर्च गर्ने निकायसमेत प्रष्ट हुन सकेको छैन। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्बीच तालमेल नमिल्दा मोदीले दिने भनेको बजेट ल्याउन नसकिएको हो।
दुवै निकायले आ–आफ्नै तालमा उक्त रकम हात पार्न दौडधुप थालेपछि सहयोग रकम नै गुम्ने खतरा देखिएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले बताए। ‘मेयरसा’प र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्षबीच समान्य छलफलसमेत हुन नसक्दा जनकपुरको कायापलट गर्न सकिने बजेट ल्याएर सदुपयोग गर्न सकिएको छैन। जुन विषय सम्पूर्ण नगरवासीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ ती वडाध्यक्षले नागरिकसँग भने।नागरिक दैनिकमा खबर छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ११, २०७६, ०८:२२:००